Vashambadzi Nhungamiro kuMafoni Ekutsvaga Kushambadzira
Nongedzo Yekushambadzira kuMobile
Muvhuro, Zvita 31, 2012 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Vhiki rapfuura ndakambotora nguva nevabereki vangu uye ndakakatyamadzwa pavakandiratidza kuti vese vaitengesa nenharembozha yavo maPhones. Kunyange vese vari vaviri vakashungurudzika nekudzidza mashandisiro avo, vakandiudza kuti zvaive zvakachipa kudhura kune iyo iPhone 4 pane yakajairwa nhare mbozha. Ehezve, yemukati scoop pane iyo ndeyekuti yavo nhare mbozha iri kutarisira kuburitsa yakawedzera mari kubva kune iyo smartphone kupfuura zvavaizoita kuburikidza nemutengo wakaderera. Chero nzira, Amai vangu vanga votombundira zvemuno zvekutenga maapplication uye nekutsvaga kwenzvimbo.
Ingori nyaya yenguva nharembozha isati yapera uye isisatombogoverwa zvachose. Izvi zvinopa ruzhinji mukana wekuwana kutsvaga kwenzvimbo nekutenga zvekushandisa - uchienderera mberi nekukwiridzira vhoriyamu uye mukurumbira wekushambadzira kwekutsvaga kwekufambisa Idzo nhamba dzinotyisa uye mukana watove pano wekuti vashambadzi vanofarira vatore mukana. StartApp inobatana nevagadziri veapp kuti ivabatsire kuita mari yakawanda kubva kune avo mahara maapplication kuburikidza nekushandisa kwekutsvaga kuita mari uye yaisa pamwechete iyi infographic pane vepamberi vashambadziri venhare:
Tags: kushambadzira nharemobile advertisingmobile search
Zvemagariro Midhiya: Nyika Yemikana Yemabhizimusi Madiki
Isa Mwoyo Wako muhukama Hwako